मिर्गौला प्रत्यारोपण र ‘क्याडाभेरीक किड्नी डोनेसन' नेपालमा पनि मृगौला रोगीहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका अनुसार नेपालमा वर्षेनी लगभग तिन हजार जना मिर्गौला फेल भएका बिरामी थपिन्छन्। बुधबार, वैशाख ७, २०७९
एक पीडित एचएको प्रश्न: चिकित्सा शिक्षा आयोगको विभेद कहिलेसम्म? चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अनैतिकताविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको उपज रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक विशेष समूहमाथि विभेद गरिरहेको भन्दा पत्याउनु हुन्नहोला, तर यो सत्य हो। शनिबार, वैशाख ३, २०७९
मेडिकल कलेजमा प्यासेन्ट सेफ्टी किन लागू गर्ने? गुणस्तर सुधारेर हामी चिकित्सक र भावी चिकित्सकले नयाँ सर्जिकल प्रविधि सिकेर बिरामीको मृत्युदर घटाउन सक्थ्यौं, उनीहरुको अनुहारमा उज्यालो भर्न सक्थ्यौं। आइतबार, चैत २७, २०७८
भिडियो ब्लग: मिर्गौला, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीले ५ हजार भत्ता कसरी पाउँछन्? मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधि उपचारबापत मासिक ५ हजार पाउनेछन्। शनिबार, चैत २६, २०७८
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक दिन गफ गर्दागर्दै मेरो टिकट लिने पालो आयो। म गएँ र टोकन देखाएर नेफ्रो ओपिडी (मिर्गाैला समन्धी) को टिकट लिएँ। टिकट पनि कति सस्तो, जम्मा पुरानो कार्ड लिएर जाने बिरामीको ५० रुपैयाँ र नयाँ बिरामीको सय रुपैयाँ। बुधबार, चैत १६, २०७८
क्यान्सर कल्चर धेरैले सोध्छन् जीवनकै अन्तिम घडीमा पुगिसकेकालाई के को गलत आस दिनु, यदि एउटा गलत आसले दर्जन थरी औषधिको काम गर्छ भने मलाई त्यो आस गलत नै भएपनि स्वीकार्य छ। तर परिवार र नजिकका साथीभाईलाई नभएको ठाउँमा आस दिनु भने उचित हुँदैन। शनिबार, चैत १२, २०७८
राज्यले गरेको अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेका ती दिन! मानसिक पिडा, शारिरीक झमेला जस्ता बेदनाका पोका कति छन कति, लेखेर र बोलेर साध्य छैन। तर भर्खर मात्र २०७८ फागुन २० गते गरेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले एक किसिमको तरंग भने पैदा गरेको छ। मंगलबार, चैत १, २०७८
जीवनको सबैभन्दा ठुलो गुरू 'अनुभव' जो मानिसको उच्च रक्तचाप र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै थियो उहाँहरुलाई अस्पताल जाने सल्लाह दियौं। यस कार्यक्रमले हामीलाई एकताको बल, समाजप्रति शुश्रुषाको भावनामा थप उर्जा, कार्यक्रम संचालन गर्ने क्षमताको विकास तथा नम्र र मिठो बोली बोल्ने शैलीको विकास गरेको छ। बिहीबार, फागुन २६, २०७८
कोरोना अनुभवः जब दाँत माझ्नु पनि उपलब्धि लाग्दछ सबै साथ दिनुहुने साथीहरुको गुण कहिलै बिर्सने छैन। अनि सबैलाई यसैमार्फत धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। कोभिडलाई हेलचक्र्याई नगरौं। नयाँ–नयाँ किसिमका भेरियन्ट देखिइरहेका छन्। सतर्क रहौं, सुरक्षित बनौं। बुधबार, माघ २६, २०७८
आठविसकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाको अध्ययन जनप्रतिनिधीहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण र सम्वृद्धिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले आम नगरबासीको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख देखिन्छ। आइतबार, माघ २३, २०७८
गलत आरोप लगाउँदै कामको मुल्यांकन! अस्पताल व्यवस्थापनमा दिनरात नभनी आफ्नो कार्यकुशलताका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा अस्पतालबाट मेरो कामको यसरी मूल्यांकन भएको छ। यसले मलाई दु:खी बनाएको छ। शनिबार, माघ १५, २०७८
र, मैले कहिल्यै कुनै साधन चलाउन सिकिनँ/जानिनँ! अब ड्राईभिङ गरेर मैले काठमाडौंमा खान सक्छु भन्ने ऑट नै आएन...... र यसरी जिन्दगीमा कुनै साधन आफैंले चलाउने रहर त्यै मरेर गए। जिन्दगी निर्वाह त जेनतेन चलेकै छ..अरू कुरा तपशील बने....। बिहीबार, माघ १३, २०७८
डियर कमरेड! छैन अस्पताल, अस्पताल जस्तो कर्मचारीको बेला बखत चेक जाँच गर्ने र चिकित्सकलाई आफ्नो काम नभई सेवा र धर्म हो भन्ने अनुभूति देखाउने, ब्लड बैंक, प्रसूति सेवा, ट्रमा सेन्टर जस्ता अति आवश्यक के छ त्यसलाई वर्गिकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने। आइतबार, माघ ९, २०७८
कोरोनासँगको दोस्रो अनुभव: बच्चा संक्रमित होला भन्ने डर पहिले जस्तै आफ्ना नानी बावुलाइ मास्क,स्यानीटाइजर,हात धुने विधिका बारेमा राम्ररी ज्ञान दिउँ,स्कुल बन्द भयो भन्दैमा मेला,महोत्सव,चलचित्र हेर्नजाने,इष्टमित्रकोमा घुमघाम गर्न जाने जस्ता असुरक्षित शेैलीले पक्कै पनी एउटा जटिल परिस्थितिको सिर्जना गर्दछ। शुक्रबार, माघ ७, २०७८
पहिलो पटक नेपालमा लगाइएको फाइजर खोपको अनुभव र सफलता फाइजर खोप व्यवस्थापनमा बढि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। कोभिड–१९ विरुद्ध दिइने यो खोप अरु खोप भन्दा भिन्न बनावटको रहेछ। अरु खोप भन्दा भिन्न प्रकारले यसलाई भण्डारण गरिन्छ। शुक्रबार, पुस ९, २०७८
प्रभावकारी बन्दै विद्यालयमा संचालित दृष्टि जाँच कार्यक्रम नेपालमा हरेक दिन ७ जना बालबालिका अन्धो हुन्छन् र तीमध्ये २ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ३० हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरुमा अन्धोपन रहेको छ। अन्धोपनाको मुख्य समस्या मोतिविन्दु र ट्रकोमा सम्बन्धी समस्या हो। शनिबार, मंसिर २५, २०७८
डाक्टरसा’ब, महिनावारी गडबड हुँदा विवाहबारे प्रश्न किन? ‘पुरुष यौन दुर्बलताको उपचार’, ‘यौन रोगका लागि’, ‘जवानीमा भूल भएको छ भने नपछुताउनुहोस्’ जस्ता सांकेतिक वाक्यहरू भित्ताभित्तामा पढ्न पाइन्छ। सोमबार, मंसिर २०, २०७८
एमबिबिएस, दसैँ र कोभिड–१९ मैले कोभिड लाग्नुअघि र लागेपछि अहिलेसम्मको कथा सुनाउनुको एउटै उदेश्य हो– कोभिड–१९ अझै सकिएको छैन। खोप लाइसकेपछि पनि सुरक्षाका उपाय अपनाइरहनु पर्छ। तर, सबै जनताले कहिलेसम्म खोप पाइसक्छन् निश्चित छैन। मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८
यसरी सम्भव भयो मान्छेमा सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण अहिले मान्छेमा सुँगुरको मिर्गौला राख्न यही गल–सेफ सुँगुरलाई प्रयोग गरिएको हो। वैज्ञानिकहरुले ‘ब्रेन डेड’ भएको मान्छेलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उसको बिग्रिएको मिर्गौला हटाएर गल–सेफ सुँगुरको मिर्गौला ल्याएर जोडे। आइतबार, कात्तिक ७, २०७८
छाउगोठ भत्काएर महिलालाई कहाँ पठाउने? म नुन बोकेर बुवासँगै पाइला मिलाइरहेको थिएँ। बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै महिनावारी भएँ। बासबस्ने ठाउँ पुग्दा शरीरभरि रगत भइसकेको थियो। हामी ताप्रिसेरा बजारमा बास बस्यौँ। आइतबार, असोज ३१, २०७८
प्याडमा अल्झिएको ‘प्रगतिशील सोच’ सायद, उनलाई लाज लाग्यो होला। फोन कल वा भिडियो कलमा पनि मिन्स भएको सुनाउँदा नसुने झैं गरी कुरा मोड्थे। हाम्रो समस्या उनलाई के थाहा भन्ने लागिरह्यो। शनिबार, असोज ३०, २०७८
'अर्कैथोक'को सर्जन! मेरो जस्ता हजूरआमाहरु जो अंग्रेजी बुझ्नुहुन्न अझै पनि नेपालको बहुसंख्यामा हुनुहुन्छ। मेरा नव-डाक्टर साथीहरु, आम समुदायले बुझ्ने भाषाको प्रयोग बढाउनेतर्फ लाग्ने कि! सोमबार, असोज २५, २०७८
अन्धविश्वासको भुमरीमा हराइन् ती सानी नानी ती महिलाले आँखाभरी आशु बनाउँदै हामीलाई प्रश्न गरिन्, ‘डाक्टरसाब मेरो कोख नै खराब त हैन नि है? अर्को बच्चा पनि यस्तै हुन्छ त डाक्टरसाब? मबाट ठूलो गल्ती भयो हैँ!’ मंगलबार, असोज १९, २०७८
पोजिटिभ पीसीआर रिपोर्टमा मान्छेले यमराजको आकृति देख्न थालेको ती दिनहरु... कोरोना महामारीबाट हाम्रो सरकारले तथा सरोकारवालाहरुले विगतबाट पाठ सिकेर आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठेर सोच्न र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। सोमबार, असोज १८, २०७८
भेरी अस्पताल मेसुको रुपमा १६ महिना: जिम्मेवारी दिने र विश्राम दिने दुवै निर्णयलाई धन्यवाद सबै कुरा यहाँ उल्लेख गर्न साध्य पनि छैन, प्रत्येकलाई सम्झेर सम्बोधन गर्न पनि सम्भव छैन। यद्यपि भेरी अस्पताललाई माया गर्ने र मप्रति सद्भाव राख्ने सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आइतबार, असोज १७, २०७८